डा. संजय खड्गीद्वारा १०२ वर्षीय वृद्धको प्रोस्टेटको सफल शल्यक्रिया - Kantipath.com
डा. संजय खड्गीद्वारा १०२ वर्षीय वृद्धको प्रोस्टेटको सफल शल्यक्रिया
१०२ वर्ष पुगेका वृद्धको प्रोस्टेटको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । सितापाइलास्थित शुभेक्षा अस्पतालमा वरिष्ठ यूरोसर्जन डा संजय खड्गीले लेजर प्रविधिमार्फत पर्वतका १०२ वर्षका कुलबहादुर गुरुङको सफल शल्यक्रिया गरेका हुन्। डाक्टरका अनुसार ३ \_४ महिनादेखि पिसाबमा समस्या हुन थालेपछि उनि उपचारका लागि आएका हुन्। शल्यक्रिया गर्न डराइरहेको परिवारलाई लेजरमार्फत गर्दा घाउ ठूलो नहुने र बिरामीलाई पनि सजिलो हुने भन्दै डा खड्गीकै सल्लाहमा शल्यक्रिया गरिएको र अहिले निकै राम्रो भइसकेको पारिवारिक स्रोतले बतायो।
उता १०२ वर्षका बिरामीको शल्यक्रिया गरेका डा खड्गीले बिरामीको अन्य शारीरिक अवस्था ठिक भएमा जुनसुकै उमेरमा पनि प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गर्न सकिने बताएका छन्। उनले कति बिरामी उमेर भइसक्यो भनेर रोग पालेर बस्ने र त्यसले दिएको सकस सहन बाध्य भएको भन्दै प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गर्नका लागि उमेरले नछेक्ने जनाए । वृद्धअवस्थामा पनि किन शल्यक्रिया गर्ने भनेर डराउन नपर्ने र लेजर सर्जरी गर्दा चिरफार गर्न नपर्ने हुँदा जोखिम खासै नहुने समेत जिकीर गरे । उनले उमेरका कारण शल्यक्रिया गर्न हुँदैन भनेर रोग पालेर नबस्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
यस प्रवीधी वाट शल्यक्रिया गर्दा कम जटिलता आउने, ठुलो चिरा लगाउनु नपर्ने, विरामी २४ देखी ४८ घण्टा भित्र डिसचार्ज हुन सकिने डा. खडकीले जानकारी दिए । डा. खडकीका अनुसार प्रोष्टेट बाईपोलार टियुआरपी २१ औं शताब्दीको आधुनीक प्रवधीको शल्यक्रिया विधी हो । जसमा विरामीलाई आधा शरीर मात्र बेहोस बनाई दुरवीनको माध्यबाट प्रोष्टेट ग्रन्थीलाई टुक्रा टुक्रा बनाई बाहीर निकालीने प्रवीधी हो । यसमा प्राय विरामीहरु ४८ घण्टा भित्र डिसचार्ज हुन्छ । अप्रेशन पश्चात विरामीको पिसावको धारा सुनिश्चीत हुने शल्यक्रिया शिविरमा संलग्न बरिष्ट युरोसर्जन डा. संजय खड्गीको दावी छ । डा. खड्गी नेपालमा मिनिपिसिएनएल प्रविधी भित्र्याउने पहिलो युरोलोजिष्ट हुन् ।
मिगौलामा पत्थरी देखिएका अभिनेता सरोज खनालको उपचार पनि यूरोलोजिष्ट डा. संजय खड्गीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । इण्डोयुरोलोजी सम्बन्धी ३७ औं विश्व सम्मेलनमा खड्गीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । इमिरेट्स युरोलोजिकल सोसाइटीले युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबु धावीमा गरेको विश्व सम्मेलनमा नेपालका सिनियर कन्सल्टेन्ट इन्डोयुरोलोजिष्ट डा.सञ्जय खड्गीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
डा. खड्गी मूत्र प्रणाली रोग उपचारमा उत्कष्ट प्रविधि मिनी पि.सि.एन.एल.मा तालिमप्राप्त भई उक्त प्रविधिमा विशेषज्ञता राख्ने नेपालका पहिलो इण्डोयुरोलोजिष्ट हुन् । नेपालमा मिनी पि.सी.एन.एल प्रविधिबाट उनले गर्दै आएका मूत्रप्रणालीको पत्थरी रोगको उपचारबारे सम्मेलनमा जानकारी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि वक्ताका रुपमा आमन्त्रित गरिएको थियो । मूत्र प्रणाली रोग विशेषज्ञमध्ये यो सम्मान नेपाली चिकित्सा इतिहास मै पहिलोपटक प्राप्त भएको हो ।
सम्मेलनमा मूलतः इण्डोयुरोलोजिकल, ल्यापारोस्कोपिक, रोबोटिक (रोबोटको सहायताले गरिने शल्यक्रिया) र उपचारमा विकसित अन्य नवीनतम् प्रविधिलगायत उपचारमा अपनाइने चिकित्सा व्यवस्थापनबारे वृहत् छलफल गरिएको थियो । साथै एकअर्काबीच अनुभव साटासाट भएको थियो । सम्मेलनमा विश्वभरका मूत्ररोग विशेषज्ञ, रेजिडेण्ट, विशेषज्ञता हासिल गर्दै गरेका चिकित्सकहरू सहित एक हजार भन्दा बढीले सहभागीता जनाएका थिए ।
Previous Previous post: अख्तियारलाई छलेर ठेक्का सम्झौता
Next Next post: उपत्यकाका प्रजिअहरुको बैठक बस्दै, थप कडाइ गर्ने